Eebla 15 Duungoo keenya keessaan wareegamtoota keenya agarra! | QEERROO
Posted on April 2, 2018 by Qeerroo
Wareegamtoonni keenya aarsaa of baasuu dhiisii aarsaa kaffaluun yeroo ulfaatu keessatti, aarsaa of baasan qabsoon har’a diina huutee qabdee jirtu akka taliiguuf riqa jabaa nuu ta’aniiru. Har’a gaafa lallabnee garbummaa ofirraa fonqolchuuf gita bittoota habashaa dura dhaabbannu riqichi irra dhaabbannee jirru, riqichi kaleessaas, Har’as, boris dhalootni irra socho’uun qabsoo finiinsaa jiran riqicha wareegamtoota keenyaati. Wareegamtoonni Bilisummaa Oromoo waan guddaa nuu gamaachanii ofii addunyaa kanarraa godaananiiru. Gaafa garboonfataan akkasuma galaanni garbummaa nu liqimsuu nutti foolatutti isaantu riqicha nuu ta’eera isaaniin gamaa gamatti, baraa baratti ce’aa jirra.
Biyya ofiif aarsaa kaffaluun waan guddaadha, kabaja, jaalala, biyya ofiif of laachuun ayyaantummaadha. Isaan kaleessa wareegamantu Tokkummaa Oromoo har’aa itiche, isaan irraa kutaaf, Gandaan, amantaan wal qooduu dhiisuu dhaalle. Isaan amantaan utuu wal hinqoodiin kaayyoo Bilisummaa qabatanii Shiniigaatti lubbuun wal faana darban sanatu tinnisa qabsoo har’aa ta’e. Wareegama gaafas kaffalaniin tinfa faffaca’uu, tinfa wal qoqooduu, tinfa wal diiguuf wal jibbuu sana barbadeessuu dhaalle..
Eebla 15 guyyaa mudhii jabeeffatanidha. Lafina waliif laafina ofii guyyaan madaalaan, guyyaan hanqina qabsoo gochaa jirruuf waan jabeessuu qabnu itti ilaallutu Ebla 15 dha. Guyyaa ofilaalii(Daawwitii); Guyyaa qabsoo ofii daawwitii wareegamtootaa keessatti of ilaallu eebla 15 dha. Daawwitiin waan fokkataa fuularra nama jiru agarsiisa, Ciimmaa akka haqannu, daalachina fuula keenyaa akka cululuqsinuuf nu gargaara. Qabsoo keessatti wareegtoota ofii yaadachuun Daawwitii qabsooti. Daawitii qabsootiin mucucaata qabsoo jabeeffatu, dadhabina cimsatu.
Wareegamtoonni keenya biyyee uffatanii, nutti kabajaa uffisuuf lubbuun tarani. Har’a wareegamtoota Bilisummaaf ija namaa guunne, wareegamtoota keenyaaf afaan keenyaan dubbannee xiqqaatus ittiin barreessaa jirra. Utuu dhiibbaa isaan hingoonee uummata bittine taanee hafna ta’a, goota lubbuu isaa laateefin Oromiyaan boquu ol qabattee ija jabinaaf gootummaan saamtota dura dhaabattee falmachuu dandeesse. Wareegamtoota kaleessa kufantu gootummaa dabaleef, isaantu boore itti horee qabsoo danbaliise. Qabsoo halagaa naasisaa jiruuf garbummaa qilee nyaachisaa jiru kanatu bu’aa wareegamtoota keenyaati. Galiin qabsoo keenyaa Bilisummaan, walabummaan, Birmadummaanis wareegamtoota keenyaan mirkana.
Ebla 1, 2018